SONY News: famoahana, telefaona, takelaka, faka ary bebe kokoa - Androidsis | Androidsis
Sony dia orinasa japoney, natsangana tamin'ny 1946 ary eo amin'ny sehatry ny telefaona hatramin'ny 2001. Ny telefaona voalohany dia natomboka tamin'ny marika Sony Ericsson, saingy nanomboka ny taona 2012 dia natomboka ho Sony Xperia, marika iray izay mbola ampiasain'izy ireo ankehitriny. Ny finday rehetra dia mampiasa Android ho toy ny rafitra miasa. Ankoatry ny finday avo lenta finday, ny orinasa dia mandefa takelaka sy fitafiana azo ampiasaina toy ny famantaranandro marani-tsaina eny an-tsena ihany koa. Izy ireo koa dia manana fakan-tsary, televiziona, na mpilalao mozika.
Ny telefaona Sony dia fantatra amin'ny kalitao avo lenta, izay iray amin'ireo marika manandanja indrindra amin'ny sehatry ny sary. Tena manao sensor ho an'ny marika maro amin'ny Android izy ireo ankehitriny. Orinasa fantatra amin'ny fanavaozana azy. Amin'ity sokajy ity dia ho hitanao ny vaovao, ny fampahalalana na ny famakafakana ireo telefaona Sony na fitaovana anao.
Ny Sony Xperia 10 III dia hita miaraka amin'ny Snapdragon 690 sy RAM 6 GB
Tamin'ny volana febroary lasa teo dia natombok'i Sony ny Xperia 10 II ho smartphone finday avo lenta ary miaraka amin'ny ...
Ny Sony Xperia 1 III dia manohy ny famolavolana sy ny fomba mahazatra
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace 6 volana .
Herinandro vitsy lasa izay dia fantatsika tamin'ny antsipiriany izay ho andiany fahatelo amin'ny haavo avo lenta an'ny Sony, ny ...
Sony Xperia 10 II dia navaozina amin'ny Android 11 araka ny nomanina
Rehefa nandeha ny volana taorian'ny namoahan'ny Google ny kinova farany an'ny Android 11 ho an'ny Pixel range, ny ...
Ny laharana Xperia Compact dia hiverina amin'ny tsena amin'ny 2021
Soavaly lehibe, mandehana na tsia. Ity teny ity dia be mpampiasa any Espana (tsy haiko raha ampiasaina any amin'ny firenena amerikanina latina) ...
Ny Sony Xperia 5 II dia manomboka mahazo ny fanavaozana Android 11
Taorian'ny nanolorany ny fanavaozana Android 11 an'ny Sony Xperia 1 sy Xperia 5, ny mpanamboatra Japoney izao ...
Sony Xperia 1 sy Xperia 5 manomboka mahazo ny Android 11 marin-toerana
Sony dia nanamafy fa ny roa amin'ireo terminal dia mahazo ny kinova azo antoka amin'ny Android 11. Sony dia ...
Sony dia nanambara ireo finday avo lenta voalohany nahazo Android 11
ny DaniPlay hace 8 volana .
Ho feno telo volana ny rafitra Android 11, na eo aza ny fanatontoloana azy, hahatratra ny smartphone isan-karazany ...
Sony Xperia 5 II dia nanambara tamin'ny Snapdragon 865, 5G ary fakantsary matihanina
Sony dia nanambara ny iray amin'ireo telefaona vaovao heverina ho avo lenta mba ho tonga miaraka amin'ny processeur matanjaka Qualcomm, dia ...
Voamarina ny famolavolana Sony Xperia 5 II
ny Nerea Pereira hace 11 volana .
Misy kely kokoa ho an'ny Sony Xperia 5 II hahitana ny jiro. Andrasana ny telefaona manaraka an'ny ...
Mampiseho tsikelikely amintsika ny fivoarany farany eo amin'ny sehatry ny telefaona ny mpanamboatra Japoney. Vao lasa izay…
Sony Xperia 1 II dia ambara miaraka amin'ny RAM 12 GB amin'ny fanontana voafetra
ny DaniPlay hace 12 volana .
Ny fividianana Sony Xperia 1 II any Japon dia tokony ho ao anatin'ny iray amin'ireo mpandraharaha roa manan-danja indrindra ...
Sony Xperia XA3 Plus dia mipoitra ao amin'ny Geekbench: fomban-kevitra lehibe naseho
RUMOR: Afaka nijanona tsy nanao telefaona finday i Sony
Sintomy ireo sary miavaka Xperia XZ2
Hihaona amin'ny Sony Xperia XZ2 sy XZ2 Compact vaovao
Sony Xperia ZX2 sy ZX2 Compact dia mivoaka
Sony Xperia XZ2 Pro: Benchmark mivoaka amin'ny Sony voalohany miaraka amin'ny efijery 18: 9
Ny Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ary Xperia L2 dia efa azo omena mialoha amin'ny BestBuy
Sony dia manambara headphones vaovao ao amin'ny CES any Las Vegas
Sony dia afaka mampiseho ny Xperia XZ1 Premium, XZ1 Plus ary XZ1s mandritra ny MWC 2018
Ireo rehetra ireo no tsipiriany tafaporitsaka an'ny Xperia XA2, XA2 Ultra ary L2
Navoaka ny famaritana ny Sony XZ manaraka
Sony Xperia R1 sy R1 Plus: Famaritana sy vidin'ny telefaona Sony vaovao
Sony Xperia XA1 Ultra, notsapainay tamin'ny MWC 2017
Ny fahasamihafana lehibe amin'ny fampisehoana amin'ny Xperia Z5 miaraka amin'ny Android 5.1 Lollipop sy Android 6.0 Marshmallow
Sintomy ary apetraho ny fampiharana farany an'ny fampiharana Xperia Z3 Walkman amin'ny Android rehetra
Olana fakantsary Sony Xperia Z3 sy Xperia Z3 Compact
Vahaolana amin'ny olan'ny fanjifana bateria ao amin'ny Xperia Z aorian'ny fanavaozana ofisialy ny KitKat